neco insurance limited(neco insurance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेको इन्सुरेन्सको खुद बीमा शुल्क २८.५३%ले बढ्यो, जगेडामा ६६.८२%को छलाङ
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको यो खुद बीमा शुल्क अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.५३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले बीमा शुल्क आर्जन १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा सीमित...
नेको इन्सुरेन्सको वार्षिक साधारणसभा आज, लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा आज (असार ३१ गते) डाकिएको छ। सभा काठमाण्डौको ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको भवनमा बिहान ११ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्ताव गरेको चुक्तापुँजीको कुल १६.३२ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ०.८२५...
आजसम्म कायम सेयरधनीले नेको इन्सुरेन्सको १५.५% बोनस सेयर पाउने
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज असार १७ गते अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि असार १८ गतेदेखि सभा सम्पन्न नहुन्जेसम्मका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज असार १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र यो कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य...
नेको इन्सुरेन्सको वार्षिक साधारणसभा असार ३१ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो असार ३१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको भवनमा बिहान ११ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्ताव...
नेको इन्सुरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको हिजो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको म्नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १६.३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेका छन्। हाल कम्पनीको...
नेको इन्सुरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. १.३६ अर्ब, नाफा ४५.५७%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४६.४६ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ९२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ...
आउँदो सातामै नेकोको मूल्य रु. १७०० नजिक पुग्ने प्रक्षेपण, यस्तो छ प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषण
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा चमक आइरहेको बेला लगानीकर्ताको ध्यान बीमा समूहमा तानिएको देखिन्छ। जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये केही राम्रा कम्पनी लगानीकर्ताले आफ्नो रोजाइमा पर्न सफल भएका छन्। भविष्यमा बीमा क्षेत्रमा आमसर्वसाधारणको सहभागिताले यो क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना तथा व्यापारलाई ध्यानमा राखी...
असोज २० बाट नेको इन्सुरेन्सले १०.७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले पौने ११ लाख कित्ताबराबर संस्थापक सेयर असोज २० गतेबाट लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। कम्पनीले १० लाख ७० हजार २०६.८४ कित्ता संस्थापक सेयर लिलाममा बेच्न लागेको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीसहित अन्य इच्छुक व्यक्ति, फर्म कम्पनी तथा संगठित संस्थाहरुले गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न...
नेको इन्सुरेन्स : बीमाशुल्क रु. १.२७ अर्ब, नाफामा ३०.५१%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । कोरोना संकटबीच नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा अधिकांश सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा बीमाशुल्कबापत १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०.९१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन १...
नेको इन्सुरेन्सको आरटीएस आरबीबी मर्चेन्टले गर्ने
काठमाण्डौ। नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको सेयर रजिष्ट्रार (आरटीएस) कार्य गर्न आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ। नेको इन्सुरेन्स र आरबीबी मर्चेन्टबीच हिजो बुधबार योसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतपत्रमा नेको इन्सुरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार खड्का र आरबीबी मर्चेन्टका तर्फबाट प्रमुख...